Uphazamiseko le mibhobho
ulapha: ekhaya ukukhulelwa Uphazamiseko le mibhobho
Phantse omnye kwiimeko ezine ukungachumi nemazi kungenxa ekuphazamiseni le mibhobho. Oku kwi Imibhobho ukuchumisa, kuba bafumene iqanda evela lasekunxele, kwaye zingene idlozi. zygote, emva ngokudibana iiseli inkunzi nemazi ngesondo, wehlela kwi umngxuma zesibeleko, kwaye apho encamathele eludongeni. Kuba umphefumlo amabhinqa ngesi ngezifo, ngokubanzi, izisongelo azikho, kodwa ekufumaneni imiqobo kwi mibhobho (njengokuba Yibethelele ukwandiswa abakhulelweyo) kunokuthintela inkqubo kwesisu ngesiqhelo zenzeka.
Iimbangi ekuphazamiseni le mibhobho ngaphezu:
iinkqubo neoplastic nabungozi nesibuhlungu kwi mibhobho.
Neziphumo kuqhutywa uqhomfo zonyango kunye nongenelelo zotyando enyama zesisu.
Ngokoyiswa okuzala amalungu tuberculosis.
mgaqweni iziphene kwi isakhiwo mibhobho.
Izifo ezosulelayo inkqubo yokuzala.
I ekumeni kwenkqubo zeehomoni.
Uphazamiseko le mibhobho: iimpawu.
Oku kudla ngezifo kukho stёrtuyu kunokuba zonyango. Uphazamiseko le mibhobho, iimpawu, leyo ingachazwayo ngokucacileyo, kwakunye ukungabikho xesheni kwi non-abakhulelweyo, Uqala ukuphazamisa umfazi idla kuphela emva eziliqela iinzame abangaphumelelanga ukufumana abakhulelweyo. Kuphela amaxesha kukho iimpawu ezifana, njengoko intlungu iphinda kumazantsi esisu, ukuba umlinganiswa sokuzoba. Kwakhona ubuhlungo esexesheni, intabalala obhobhozayo yellow, nangaphandle iintlungu iintlungu ngexesha neentlobano.
Emva ukuqokelelwa ngokucokisekileyo iimpawu, ngokuqalisa ngeenkqubo yoxilongo ukungqinisisa isigulo. iindlela ezisisiseko sokumiselwa kwimiqobo ye mibhobho:
Transvaginalьnый indlela gidrolaparoskopicheskiй.
Unyango kwimiqobo ye mibhobho.
Unyango kwimiqobo ye mibhobho becala uya kuxhomekeka yimalini uqhuba le ngezifo, sezizathu oko kwabanga yakhe ngesimilo iimpawu. Kwezinye iimeko, kwanele ukuba ukubuyisela iincindi kunye ukuphelisa uxinzelelo. Kwi izifo ezikralayo ibonisa iziyobisi njengemchiza, ndolula, kwaye kwezinye iimeko utyando. Kuyo nayiphi na imeko, imbonakalo kwimiqobo waphawula Tubhali kufuneka bafune iingcebiso unyango kwangoko.